Politika · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Aogositra, 2012
Amerika Avaratra 31 Aogositra 2012
Hatao amin'ny 4 Septambra 2012 izao ny fifidianana solombavam-bahoaka 2012 any Quebec. Hifidianana ireo solombavambahoaka andiany faha-40 ho ao amin'ny Antenimieram-pirenen'i Québec izy io. Ireo fitsapan-kevitra farany dia maneho fa ireo mpitaky fizakan-tena avy amin'ny antoko Parti Québécois (PQ) no mitarika. Ny adin'ny mpirahalahy eo amin'ny federalista sy ny mpitaky fizakan-tena no nandrafitra hatry ny fiainana ara-politikan'i Québec. Maneho hevitra momba ilay fitsapan-kevitra, herinandro vitsy mialoha ny fifidianana Ireo mpikirakira aterineto ao Québec.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Aogositra 2012
Afrika Mainty 29 Aogositra 2012
"@zittokabwe Azafady meteza ho tsaratsara kokoa noho izaho fahiny. Tsy fahafinaretana ny eto Eo am-piomanana ny handoa ny sarany amin'ny sasany amin'io aho izao." Bitsika taorian'ny fahafatesan'ny Praiministra Etopiana Meles Zenawi ho an'i Zitto Kbawe Mpikambana ao amin'ny Parlemanatera Tanzaniana nahatonga sahotaka.
Azia Afovoany sy Kaokazy 28 Aogositra 2012
Amin'ity Septambra ity, miomana ny hanao ny 'Caucasus-2012' miaraka amin'ireo tafiky avy amin'ireo faritra nihataka tamin'i Zeorzia, faritanin'i Abkhazia sy Ossetia Atsimo. Caucasus-2012 dia hatao any amin'ny faritra Kaokazy Avaratra, ary hahitàna fandraisan'anjaran'ny [ru] miaramila 8.000, hatraminà fitaovana mavesatra, artillerie, sambo, ary fiaramanidina mpiady. Io no ho fanazarantena lehibe indrindra nataon'ny Rosia tamin'ity taona ity. Hampitony ny Zeorziana ve izany?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Aogositra 2012
Niatrika fitsarana miaramila i Ayoub Massoudi, mpanolotsaina fahiny ny Filoha Toniziana Moncef Marzouki, noho ny fanambaràny momba ny Praiminisitra Libiana teo aloha, Baghdadi Mahmoudi (fony Gaddafi). Nolazainy fa "famadihana ny Fanjakana" ilay fampodiana.
Eoropa Andrefana 22 Aogositra 2012
Amin'izao fahasahiranana ara-toekarena misy ankehitriny izao, mifanjevo amin'ny hafatra sosialy maro ny graffiti. Ity ny sasany amin'ireo haikanto an-tanan-dehibe.
Etazonia: Midika Inona Ho An'ny Olona Miteny Espaniola i Paul Ryan
Hatramin'ny andro nisafidianan'ilay Repoblikana mihazakazaka amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, Mitt Romney, an'i Paul Ryan mpikambana ao amin'ny Kaongresy ao Wisconsin, ho mpiray lisitra aminy, goavana tokoa ny fandrakofan'ireo mpampahalala vaovao an'izany, na mpomba, na mpanohitra ilay fanapahan-kevitra.. Vitsy no voalaza momba ny fiantraikany teo amin'ny vahoaka tao Etazonia ary indrindra indrindra fa ny vondrom-piarahamonin'ireo miteny Espaniola.